PressReader - Isolezwe: 2019-01-11 - Umculi waseDRC nethemba kuTshisekedi
Umculi waseDRC nethemba kuTshisekedi
ISIHLABANI somculo esizinze eNingizimu Afrika kodwa esidabuka eDemocratic Republic of Congo (DRC) sithi siyajabula ngokuqokwa kukamengameli omusha kuleliya lizwe uMnuz Felix Tshisekedi omenyezelwe izolo.
Ekhuluma ohlelweni lukaDineo noLerato kwiMetro FM, iThe Bridge, uTresor uthe: “Siyajabula ngokuqokwa kukamengameli oqokwe ngokwentando yabantu. Sinethemba lokuthi uzofukula isimo somnotho alethe impilo engcono kubantu baleliya lizwe,” kusho uTresor.
UTshisekedi (55) ngumholi weqembu ebeliphikisa uhulumeni wobengumengameli uJoseph Kabila i-Union for Democracy and Social Progress, elasungulwa nguyise ongasekho uMnuz Etienne Tshisekedi.
Uyise ushone ngoFebhuwari wonyaka odlule wase eqokwa ukuba avale isikhala sakhe.
Utshele abantu baseDRC ukuthi uzolwa nenkohlakalo ebidla lubi kuleliya lizwe futhi aqede nodlame.
UTshisekedi uhlule umholi wePeople’s Party for Reconstruction and Democracy (PPRD), uMnuz Emmanuel Ramazani Shadary.
UShadary nguye obemele iPPRD emuva kokuthi obengumengameli waseDRC uKabila ememezele ukuthi ngeke angenele elinye ihlandla. UKabila ubesebe ngumengameli waseDRC iminyaka ewu-17 njengoba angena ngo-2001 emuva kokushona kukayise kuze kube wu-2018.
Khonamanjalo iCatholic Bishops Conference ebinezithunywa ezibheke ukhetho eziwu-40 000 iveze ukuthi izibalo zayo zikhombisa ukuthi kuwine uMnuz Martin Fayulu ohola elinye iqembu eliphikisayo.
UMENGAMELI omusha waseDRC uMnuz Felix Tshisekedi uthi uzoqeda inkohlakalo nodlame kuleliya lizwe